Meheradaha dadka ajnabiga ah ee Soweto oo la bartil-maameedsaday - BBC News Somali
Meheradaha dadka ajnabiga ah ee Soweto oo la bartil-maameedsaday
30 Agoosto 2018
Image caption Ganacsade Soomaali ah oo lagu dhaawacay magaalada Soweto.
Saddex qof ayaa lagu dilay dalka Koonfur Afrika intii ay socdeen rabshado arbacadii dalkaasi ka dhacay oo lagu bartilmaameedsaday ganacsi ay lahaayeen dad ajaanib ah oo ku sugnaa magaalada Soweto, sida ay Booliisku sheegeen.
Image caption Dibadbaxyada ayaa dillaacay kadib markii la sheegay in dukaanleydu ay gadaan cuntooyin dhacay, sida ay sheegayaan wararka laga helayo dadka deegaanka. sida la rumaysan yahay rabshadaha ayaa qarxay kadib markii nin Soomaali ah oo halkaas dukaan kulahaa uu toogtay nin dhalinyaro ah oo isku dayey in uu boobi dukaankiisa.
Image caption Dukaamadii ajaanibta ayaa la bililiqaystay, waxaana kamid ah dukaankaan oo uu lahaa nin Itoobiyaan ah.
Image caption Booliiska ayaa xiray 27 qof oo ku lug lahaa boobka iyo rabshadaha. Sanadkii 2008, 62 qof ayaa la dilay, 41 ayaa ajaanib ahaa halka 21 kale ay u dhasheen dalka Koonfur Afrika.
Image caption Booliiska oo baaraya dad looga shakiyey Rabshadaha.
Image caption Security has been stepped up following the protests and violence and shopkeepers were told to temporarily close their businesses.
Image caption qaar kamid ah ganacsata oo ka cabsi qaba rabshado hor leh. " Dawlad kama jirto halkaan, haddi halkaan ay dawlad kajiri lahayd , waxay xakamayn lahayd waxa dhacaya" qof kamid ah ganacsata ayaa hadalkan laga soo xigtay.
Image caption Waxaa jira Cabsi laga qabo in ay rabshaduhu kusii faafaan qaybo kamid ah dalka, sidii dhacday sanadkii 2008, sida u sheegayo Wariyaha BBC-du.
Image caption Masuuliyiinta deegaanka ayaa sheegay in ay xaqiijinayaan wararka Sheegaya in ganacsatu ay iibinayeen alaab dhacday.